शृङ्खलाको जीत, निर्मलाको हार – BRTNepal
विश्वमान आङ्गदेम्बे २०७५ मंसिर २३ गते ९:३३ मा प्रकाशित
“वीर गोर्खाली” को नाममा वीरताको अनि भाग्यले गर्दा नेपालले पाएको “सगरमाथा” र “गौतम बुद्ध” को नाममा हामी नेपालीहरूले गर्व गरेको दशकौँ भइसक्यो । तर बदलिँदो संसारसँगै महाकवि देवकोटाका नेपाली “वाग्नर”, “आइन्स्टाइन”, र “नाइतिनगेल” हरू कुटो-कोदालो अनि घाँस-दौराको संसारबाट बाहिर निक्लेर नेपाललाई संसारमै चिनाउने काम गर्दछन् I तेस्को एक उदाहरण हुन्, नेपालकी छोरी “शृङ्खला खतिवडा”, जो पहिलो पटक भारतकोजस्तो बलियो प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर “विश्व सुन्दरी २०१८” को अन्तिम १२ मा नेपालबाट पहिलो पटक पुग्न सफल मात्र भइनन्, “मल्टिमिडिया” र “उद्देश्य सहितको सुन्दरी” को ताजहरू जित्न सफल भइन I शृङ्खलाको यस्तो अविस्मरणीय जीतमा एक नेपाली भएर खुसी हुनुपर्नेमा नेपालकी अर्की छोरी “निर्मला पन्त” को अमानवीय “बलात्कार” अनि “हत्या” जस्तो जघन्य अपराधको अहिले सम्म उनको आत्माले “न्याय” नपाएको देख्दा खुसी हुन सकेको छैन I दोषीहरूलाई आज १५९ दिन भइसक्दा पनि सरकाले कारबाही त के सच्चा दोषी “पहिचान” समेत गराउन सकेको छैन I त्यसैले आज म नेपाली भनेर गर्व गर्न सकेको छैन I यो नेपाली शिर झुकेको छ I यो नेपाली मन दुखेको छ ।
नेपाल संसारमा अहिले “क्रिकेट” देखि “विश्व सुन्दरी” मा जसरी चिनिएको छ, त्यो केवल केही होनहार व्यक्तिहरूको कारणले हो I नेपाल जस्तो देशबाट दयनिय पूर्वाधार, अस्तव्यस्त प्रशासन, अनि राज्यबाट असहयोग हुँदाहुँदै पनि केवल आफ्नो लगनशीलता अनि परिश्रमले नेपाललाई संसारमै चिनाउनु कम चुनौतीपूर्ण काम हैन I शृङ्खला खतिवडा र पारस खड्का जस्ताले नेपालमा जन्मेको मा धन्य हुनुपर्ने छैन, बरु नेपाल यस्ता व्यक्तिहरू जन्मेकोमा धन्य हुनुपर्दछ I
नेपाल जति पनि संसारमा चिनिएको छ केवल व्यक्तिको आफ्नो लगनले गर्दा चिनिएको छ I समग्र देश र समाजको रूपमा हेर्ने हो भने मैले गर्व गर्ने कुनै ठाउँ देखेको छैन I सामूहिक रूपमा एक देशको रूपले अझै पनि हामी संसारकै गरिब देश छौँ, दुवै आर्थिक अनि राजनीतिक हिसाबले I आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने संसारकै नाकाबन्दी खेपिरहेको “चरम साम्यवादी” “उत्तर कोरिया” भन्दा पछाडि छौँ । राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने “लोकतन्त्र” त छ तर “भ्रष्टाचार” को मामलामा अफ्रिकाको “इथियोपिया” भन्दा पछाडि छौँ । यही चरम भ्रस्ताचारले आम जनताको “जागिर” देखि “न्याय” र “मानव अधिकार” सम्म खाइदिएको छ । लोकतन्त्र त छ तर न्याय छैन । मताधिकार त छ तर मानव अधिकार छैन । यो कस्तो लोकतन्त्र ? के यो लोकतन्त्र ठुला-ठाला, धनी-मानी, अनि पहुँचवालाको लागि मात्र हो ?
चरम राजनीतिले बिग्रिएको देश अनि समाज
कुनै पनि कुराको सीमा हुनुपर्दछ । तर नेपालमा धेरैकुराको सीमा छैन जसमा “राजनीति” एक नम्बरमा पर्दछ । घरको दाल-भात देखि देशका ठुला-ठुला परियोजना सम्म, सडक देखि सदनसम्म, शिक्षा देखि स्वास्थ्यसम्म, जागिर देखि वृद्ध-भत्तासम्म, अनि मानव अधिकार देखि न्यायसम्म राजनीति छ I हुँदा-हुँदा देश देखि सात समुन्द्र पारी समेत नेपालीहरूको उही नेपाली राजनीति छ I लोकतन्त्रको पनि वर्गीकरण हुन्छ I नेपाल एक लोकतन्त्र भए पनि हाम्रो “तेस्रो विश्व” को “भ्रष्ट” लोकतन्त्र छ I अमेरिका र युरोपको जस्तो आम नागरिकले पनि उत्तिकै न्याय पाउने सच्चा लोकतन्त्र हाम्रो लागी धेरै टाढा छ I सच्चा लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको “मानव अधिकार” अनि “न्याय” सुरक्षित अनि सुनिश्चित हुन्छ I न्यायका रक्षक “प्रहरी प्रशासन” रानजीति-मुक्त स्वतन्त्र हुन्छ अनि न्याय दिलाउने अदालत झनै स्वतन्त्र हुन्छ I तर नेपालमा न प्रहरी स्वतन्त्र छ न त अदालत नै I जताततै राजनीतिक नियुक्तिले देशको “न्याय-प्रणाली” धमिराले खाएको काठ झैँ बनेको छ I जब सम्म राज्यका यी दुई न्यायका पहरेदारहरू राजनीति-मुक्त अनि स्वतन्त्र हुन्नन्, तब सम्म आम जनताले “न्याय” पाउने कुनै सुनिश्चित हुन्न I
जब यो देशमा “बाल कृष्ण ढुङ्गेल” जस्ता कर्तव्य ज्यानका अपराधीहरूलाई देशको राष्ट्र-प्रमुखबाट “आम-माफी” दियिञ्छ, तब “न्यायको लिलामी” यो देशमा सुरु हुन्छ I आफ्नो पार्टी वा गठबन्धनका नेता वा कार्यकर्ता भन्ने बित्तिकै जस्तो सुकै गल्ती र अपराधलाई आँखा चीम्लेरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडी देशको शिर झुकाउने जस्तो “आम-माफी” दिएर यो सरकार अनि राष्ट्र-प्रमुखबाट एउटा डरलाग्दो “नजिर” बसिएको छ जसले “मानव अधिकार” अनि “न्याय” को त धज्जी उदाएकी छ, लोकतन्त्रलाई समेत दूरगामी हिसाबले घात गरेको छ I कुनै पनि कारणले, राजनीतिक होस् वा अन्य, “हत्या” अनि “बलात्कार” जस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई छुट हुनुहुन्न I यो सभ्य समाजको लागि हुँदै नहुने कुरा हो I आज “निर्मल पन्त” को घटनामा पनि त्यही रानजीति मुछिएको छ I सच्चा दोषीको राजनीतिक पहुँचले गर्दा आजसम्म कुनै कारबाही त के पहिचान सम्म हुन सकेको छैन I पैसा र पहुँचमा “न्याय” बिकेको छ I एकातिर सरकारतर्फबाट यस्तो छ भने अर्को तिर विपक्षी समूहबाट घटनालाई एउटा राजनीतिक फाइदाको रूपमा अगाडी बढाउने चेष्टा भएको छ I दुवै गलत हो तर निष्पक्ष रूपमा भन्नु पर्दा सरकार पक्षको घटना प्रतिको राजनीतिक “ढाक-छोप” अनि “उदासिनता” देखिने खालको ढिला-सुस्तीले सरकारको निकै ठुलो गल्ती छ अनि सरकारकै नेताहरू यो “ढाक-छोप” षड्यन्त्रमा लागेको सोझै शंखा उब्जन्छ I
निर्मला : तपाइकी छोरी, तपाइकी बहिनी
निर्मला पन्तको घटना हामी र हाम्रो समाजको लागि ठुलो झापड हो । यसले हामी र हाम्रो समाजलाई नंग्याएको छ । हाम्रो समाज महिलाहरूको मामिलामा अनि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको मामला कति तल रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । निर्मला कुनै परको केटी हैन तपाईँ-हाम्रै छोरी हो, तपाईँ-हाम्रै बहिनी हो । आज निर्मलालाई यस्तो गर्नेले भोलि तपाइको छोरी अनि बहिनीलाई त्यस्तै गर्न सक्छ । पैसा अनि पहुँचले तपाइको छोरी अनि बहिनीको इज्जत किन्न सक्छ I अनि त्यति बेला तपाईँ के भन्नु हुन्छ? घटना भइगयो, मर्ने मारी सक्यो, अब मिला-पत्र गरम? तपाइको छोरी अनि बहिनीको इज्जत अनि ज्यान त्यति सस्तो छ ? एक चोटि आफैलाई निर्मलाको बुवा अनि आमाको ठाउँमा उभिएर सोच्नुस् त? राजनीतिक अनि सामाजिक दबाबमा गरिने मिलापत्रले नै गर्दा आज यस्ता ठुला-ठुला जघन्य अपराध गर्ने दुसाहस मिलेको छ ।
अर्को कुरा, आफ्ना छोराहरूलाई आमा-हरूले सानै देखि महिलाप्रति सम्मान देखाउने संस्कार अनि मानसिकताको विकास गर्नु एकदम जरुरी छ । अनि छोरीहरूलाई साना भन्दा साना अन्याय र अत्याचार अपशब्द देखि यौनिक हिंसा नसहन अनि तुरुन्त “रिपोर्ट” गर्न सिकाउन जरुरी छ । हाम्रो समाजको समग्र सोचाइमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । संस्कार, सोचाइ, अनि राजनीतिमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । निर्मला एक प्रतिनिधि पात्र हुन् र उनी नेपालीहरूको मानसपटलमा कालान्तरसम्म झस्काउने गरी बसिरहनेछिन् । उनको आत्माले न्याय नपाउँदा तपाईँको छोरी, मेरो छोरीले न्याय पाएको छैन । प्रत्येक नेपालीको छोरीले न्याय पाएको छैन । नेपाली हुनुमा आज कुनै गर्व छैन ।